KMSPICO Windows ကို 10 - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Pro ကို Active - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » KMSPICO Windows ကို 10 – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Pro ကို Active
KMSPICO Windows ကို 10 – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Pro ကို Active
အားဖြင့် softkelo | သြဂုတ်လ 20, 2017
KMSPICO Windows ကို 10 Windows ကိုသည်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် 10 နှင့်ရုံး 16, မကြာခဏ updated နှင့် 100% အမြဲတမ်းကို Windows နှင့် Microsoft ရုံးမဆို version ကိုသက်ဝင်စေဖို့သန့်ရှင်းတဲ့ tool တစ်ခု 2016 စက္ကန့်ပိုင်းအပြည့်အဝ working.It တဲ့ကိစ္စအတွင်းမှာအစီအစဉ်တထိုကဲ့သို့သောကို Windows အဖြစ် Microsoft ကထုတ်ကုန်ကိုသက်ဝင်ဖို့အသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် & တစ်ဦးပေးဆောင်လိုင်စင်မသုံးဘဲ Office ကို.
သင်တစ်ဦးခိုးကူး Windows သို့မဟုတ် Microsoft က Office ကိုအသုံးပြုသူ Are? Windows ကို 10 active Kmspico တစ်ဦးအားလုံးအတော်လေးလူကြိုက်များကြောင်းတစ်ခုမှာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ဖြစ်ပါသည်. ဤလှုပ်ရှားမှုသည် Windows နဲ့ Microsoft Office ကိုနီးပါးအားလုံးဗားရှင်းကိုသက်ဝင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်. ဤလှုပ်ရှားမှုတိုင်း Boot တက်ကွန်ပျူတာသင်၏ Windows သို့မဟုတ် Microsoft Office ကို activation reset ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ Windows သို့မဟုတ်ရုံးအပြီးအပိုင် activated ပါလိမ့်မည်.
KMSPICO Windows ကို Download လုပ်ပါ 10
KMSPICO Windows ကို 10
စစ်မှန်သောလိုင်စင် - ဒီ activation သင်ပိုက်ဆံပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ရရှိသည့် Microsoft ကလိုင်စင်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျပြတင်းပေါက် updates များကိုမဆိုကြင်နာကိုသုံးနိုင်သည်, အွန်လိုင်း apps များနှင့်, Microsoft ကတိုက်ရိုက်လွှအကောင့်သို့မဟုတ်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကဖြန့်ချိမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း.
တစ်သက်တာ activation - ဒီကဲ့သို့စမ်းသပ် activation မဟုတ်ပါဘူး 30 ရက်ပေါင်း, ဒီ activation အမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးအချိန်ကာလအတွင်းတပ်ဆင်ပြန်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
အပြည့်အဝ updated - ဒီ Activity မကြာခဏ detect ရတဲ့မပါဘဲစစ်မှန်သောပြတင်းပေါက်လိုင်စင်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသင်း daz developer များအားဖြင့် update လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
ထောက် 32 bit / 64 bit - KMSPico နှစ်ဦးစလုံးကို support 32 နည်းနည်း & 64-Microsoft Windows နဲ့ Microsoft Office ၏နည်းနည်းဗားရှင်း.
100% စင်ကြယ်သော - ဒီ tool ကိုမဆိုအန္တရာယ်ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများဆံ့မခံပါဘူး.
လုံးဝအခမဲ့ - သင့်ပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ် Microsoft Office ကိုသက်ဝင်မှပင်တစ်ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရန်မလိုပါ.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: Tubemate - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် youtube က Downloader ကို 2.2.9
ဒါကနောက်ဆုံးပေါ် activation software ဖြစ်ပါသည် Windows ကို 10 active အဖွဲ့ daz ကတီထွင်, နှင့်ဤအကျော်ကြားဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် Windows ကို 10 Pro ကို active တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ. ပထမဆုံး Windows ကို 10 Kmspico အတွက် daz အဖွဲ့ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် 2007 ကြောင်းပြတင်းပေါက်သာ activate လုပ်နိုင်ပါတယ်7နှင့် Vista. Windows ကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ 8 နှင့် 8.1, သူတို့သည်လည်း Microsoft ကရုံးကိုသက်ဝင်နိုင်သော kmspico9 တီထွင်. နှင့်ဤနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်ကိုသက်ဝင်နိုငျသောပထမဦးဆုံး tool ကိုခဲ့သည်. နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင် 10 active ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိမည်သည့်ပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်ရုံးဗားရှင်းကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်. ယနေ့ Download KMSpico Windows ကို 10 active.
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောပြတင်းပေါက်အဖြစ်လူကြိုက်များဆော့ဖ်ဝဲကို hack ခြင်းနှင့်အက်ကြောင်းအများကြီးဖွံ့ဖြိုးသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဟက်ကာအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်7loader ကို, ရုံး 2003, ရုံး 2007, IDM အက်ကွဲ, တစ်လောကလုံးရုံး Active စသည်တို့ကို. သူတို့ကထက်ပိုမိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ 100 အခမဲ့အက်ကြောင်းနှင့်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ. ကီလိုမီတာ Active ကို Windows 10 ကမ်ဘာပျေါမှာအာဏာအရှိဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်. ဒေါင်းလုပ် Windows ကို 10 ကီလိုမီတာ active.
ဒေါင်းလုပ် Windows ကိုများအတွက် KMSpico 10 အပေါ်ကလင့်ခ်ကနေတဆင့်
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ antivirus ကိုပိတ်ထားပါ
သငျသညျအစောပိုငျးက WinRAR Run ကိုအတူ download လုပ်ပြီးပြီဖိုင်တွေကို Extract
KMSpico 10.2.0 Run ကိုအာသနန်းစံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတွက် Final.exe
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စောင့်ဆိုင်း5မိနစ်များ
သင်၏ Windows နဲ့ Microsoft Office ကိုအပြီးအပိုင် activated နေကြတယ်!
KMSpico Activate နိုင်သလား:
Windows Vista ကစီးပွားရေး / N / လုပ်ငန်း / N ကို
Windows ကို7ပရော်ဖက်ရှင်နယ် / N / လုပ်ငန်း / N ကို
Windows ကို 8/8.1 အားလုံး
Windows ကို 10 အားလုံး
Windows Server 2008 / နျ Standard / Datacenter / လုပ်ငန်း / 2008R2 / နျ Standard / Datacenter / လုပ်ငန်း /
Windows Server 2012 / နျ Standard / Datacenter / 2012R2 / နျ Standard / Datacenter
Windows Server 2016 (သီအိုရီ)
← Tubemate – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် youtube က Downloader ကို 2.2.9 လိုင်စင် key ကို Adguard – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ပရီမီယံ 6.1 ဗားရှင်း →
လိုင်စင် key ကို Adguard - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ပရီမီယံ 6.1 ဗားရှင်း
Adobe က Photoshop ကို CS6 တိုးချဲ့ Crack - serial နံပါတ် Generator ကို
Hitman Pro ကို Key ကို - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်အပြည့်အဝ Crack ဗားရှင်း + လိုင်စင် Key ကို